Maqaalkani wuxuu bixiyaa macluumaad la taaban karo oo ku saabsan dugsiyada ugu fiican injineernimada adduunka iyo deeqaha waxbarasho ee ay siiyaan ardayda.
Injineeriyadu waa mid ka mid ah xididada qotada dheer ee sayniska, iyadoo wax ku soo kordhisay welina wax ku soo kordhineysa adduunka ma jirto qeyb ka mid ah adduunka oo injineernimada aysan saameyn, waa mid ka mid ah aasaaska ugu weyn ee dunidu ku dhisan tahay.
Sahaminta injineernimada waxay ka dhigtay inay soobaxdo laamo kale oo aad muhiim u ah sida, injineernimada kiimikada, injineernimada madaniga ah, injineernimada makaanikada, injineernimada kombiyuutarka, injineernimada aerospace iyo farsamooyin kale oo fara badan oo gacan ka geystey qaabeynta aadanaha iyo adduunka guud ahaan.
Maaddooyinkan wali waa la sii baadhayaa sidaas awgeed wali waxay ku soo kordhinayaan adduunka waxaana lagu baranayaa hay'ado kala duwan oo loogu talagalay dadka daneynaya inay ka helaan aqoon ku filan laan kasta oo injineernimada ah isla markaana ka qayb qaataan wax ku biirinta bulshada.
Intaad ku jirto, waa inaad hubisaa maqaalkan aan ka abuurnay 9 jaamacadaha injineernimada farsamada sare ee Kanada si aad u kobciso oo aad u horumariso xirfadahaaga dhinaca injineernimada, ardayda caalamiga ah sidoo kale way dalban karaan dugsiyadan laakiin marka hore waxaad u baahan tahay inaad wax ka ogaato Xeerarka fiisaha ardayda Kanada iyo shuruudaha inaad bilowdo safarkaaga waxbarasho ee Kanada
Injineernimada Anshax ahaan
# 1 Machadka Teknolojiyadda Massachusetts (MIT)
# 2 Jaamacadda Stanford
# 3 Jaamacadda Cambridge
# 4 ETH Zurich - Machadka Farsamada ee Federaalka Switzerland
# 5 Jaamacadda California, Berkeley (UCB)
# 6 Jaamacadda Oxford
# 8 Jaamacadda Teknolojiyada Nanyang (NTU)
# 9 Jaamacadda Tsinghua
# 10 Jaamacadda Qaranka ee Singapore (NUS)
# 11 Machadka Farsamada ee Georgia
# 12 EPFL Lausanne - Machadka Farsamada ee Federaalka Switzerland
Injineeriyadu waa mid kamid ah culuunta uguhoreysa ee hagaysa ninka mustaqbalka sidaas darteed dhamaanba hay'adaha aduunka waxay bixiyaan injineernimada iyo edbinta laxiriira laakiin waxaa jira iskuulo qaarkood oo kuwa kale kabaxa dhanka injineernimada.
Iskuuladan waxay si adag uga shaqeeyeen inay helaan aqoonsiga ay maanta haystaan, waxay kaloo gacan weyn ka geysteen qaadashada injineernimada ficilkan iyo kuwa kale oo badan ayaa ka dhigay iskuuladan inay helaan aqoonsi caalami ah waxaana loo aqoonsaday inay yihiin iskuulada injineernimada ugu wanaagsan. adduunka.
Eeg liistada aan ka sameynay kan 8 kulleejooyinka injineernimada dhexdhexaadka ah ee ugu wanaagsan ardayda, Iyagu waa ka tartan yar yihiin waxaana hubaal ah inay si siman kuu siinayaan waxbarasho tayo leh oo ku saabsan cilmiga injineernimada.
Iskuuladan injineernimada ugu fiican waxay si weyn u caawiyeen adduunka oo halkaas kuma ekeyn, iskuuladan sidoo kale waxay caawiyaan ardaydeeda, gudaha iyo dibaddaba, iyagoo siiya abaalmarino deeq waxbarasho si ay uga caawiyaan xirfaddooda injineernimada.
Hoos waxaa ku yaal liiska jaamacadaha injineernimada ugu fiican adduunka oo ay la socdaan macluumaadka deeqaha waxbarasho.
Machadka Farsamada ee Nanyang
Jaamacadda Qaranka ee Singapore
MIT ayaa kaalinta koowaad ka gashay dugsiga injineernimada ugu fiican adduunka, iyada oo ay ku darsatay bixinta heerka, waxbarashada tayada leh ee sayniska iyo teknolojiyadda oo ay ku jiraan tabarucaadda caalamiga ah. MIT waxaa loola jeedaa ujeedada ah in adduunka laga dhigo mid ka sii wanaagsan iyada oo loo marayo hal-abuurnimo, cilmi baaris iyo waxbarasho.
MIT waxay bixisaa baahi ku saleysan deeq waxbarasho oo loogu talagalay ardayda jaamacadda kuwaas oo ay kafaala qaadaan MIT ardaydii iyo asxaabtii, iyo lacagaha guud ee MIT. 59% ardayda dhigata shahaadada hoose ee 'MIT' waxay sanad walba helaan deeqo waxbarasho si ay uga caawiyaan waxbarashadooda.
Waxaa la aasaasay 1885 waxaana tan iyo markii loo aasaasay goob barasho, hal-abuurnimo, daah-fur, hadal iyo hadal, Stanford waxaa lagu qiimeeyaa dugsiga labaad ee ugu fiican injineernimada adduunka oo ardayda siisa xirfado iyo aqoon ku filan oo ay uga dhigaan injineero buuxa.
Iyada oo ujeedadu tahay taageeridda ardayda iyo ka dhigista inay ka qaybqaataan waxbarashadan heerka caalami, Jaamacadda Stanford waxay bixisaa kaalmo deeq waxbarasho oo sanadle ah kaas oo ay heli karaan ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha labadaba.
Deeqda waxbarasho ee jaamacadeed waxay ku saleysan tahay baahida halka deeqda waxbarasho ee qalin-jabinta ay ku saleysan tahay lacagaha la heli karo iyo waxqabadka muuqda ee ardayga. Ku dhawaad ​​80% ardaydu waxay helaan deeqo waxbarasho sanadkii.
Tani waa iskuul kale oo caan ah oo leh aqoonsi caalami ah oo aan hubo inaad la yaabtay inuu ka mid yahay dugsiyada injineernimada ugu fiican adduunka. Jaamacadda Cambridge waxaa la aasaasay 1209, taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah jaamacadaha ugu faca weyn adduunka, tan iyo markaasna waxay ardayda ka buuxineysay qanacsanaan heer sare ah oo xagga waxbarashada ah, cilmi baaris iyo barasho heer caalami ah.
Jaamacadda Cambridge waxay bixisaa abaalmarinta deeqda waxbarasho ee ardayda jaamacadda ku saleysan baahida si ay u helaan waxbarashadii ay mudnaayeen oo ay u noqdaan jaamiciyiin dhameystiran oo bulshada ka tirsan. Deeqdani waxaa loogu talagalay ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ahba heerka koowaad.
Waxaa la aasaasay 1854 oo ku taal Zurich, Switzerland, ETH Zurich waa jaamacad cilmi baaris dadweyne u heellan waxbarista injineerada iyo saynisyahannada waxayna sifiican ugu barwaaqowday dhinacaas si loogu qoro halkan mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican adduunka. Aqoonsigeeda darajooyinkan ayaa sidoo kale laga yaqaan adduunka, iyada oo la siiyay waxtarka ay u leedahay adduunka tan iyo aasaaskeedii.
Ku-biirinta ay sameeyeen ETH Zurich waxay saameyn togan ku yeesheen adduunka oo xitaa waxay saameyn ku yeelatay shaqsiyaadka doonaya inay halkaas wax ku bartaan iyada oo loo marayo barnaamijkeeda deeq-lacageed ee deeqsinimada leh. Deeqaha waxbarasho waxay ku saleysan yihiin baahi waxaana heli kara ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba inay codsadaan. Ardayda doonaya inay raacaan a Shahaadada Masterka sidoo kale waxaa la siiyaa deeqo waxbarasho iyadoo lagu saleynayo waxqabadkooda waxbarasho.
Maaddaama ay tahay jaamacad cilmi baaris dadweyne oo leh himilo ah in jiil kasta loo horumariyo wanaagga weyn, UCB waxay ku leedahay sharaf xagga injineernimada iyo adduunka oo dhan iyadoo ay ugu wacan tahay kaalinteeda weyn ee sayniska taasna sababo badan ayaa ugu wacan inay caan ku tahay mid ka mid ah dugsiyada ugu fiican injineernimada adduunka.
UCB waxay u kaxaysaa ardayda heer sare waxayna ku qalabeysaa xirfadaha ku filan ee looga baahan yahay inay noqdaan arday injineernimo caan ah iyadoo aan loo eegin goobta aad qaadato.
Si looga dhigo arday kasta oo xiiseynaya inuu qeyb ka noqdo waxbarashadeeda heer caalami, UCB waxay bixisaa noocyo kala duwan barnaamijyada tacliinta si looga caawiyo kharashka waxbarashada ardayga. Deeqaha waxbarasho ayaa loo heli karaa ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba si ay u codsadaan.
Oxford waa mid ka mid ah jaamacadaha adduunka ugu horreeya iyo sida ay ugu fiicantahay injineernimada, waxay ku jirtaa mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican adduunka. Oxford waa meesha lagu xoqdo laguna horumariyo kartidaada injineernimada, qaabeeyo oo kugu qalabeeyo astaamaha saxda ah si aad ugu guuleysato meesha injineernimada.
Iyada oo ah qaab lagu muujiyo taageero dheeri ah ardaydeeda, Jaamacadda Oxford waxay bixisaa taxane ah barnaamijyada tacliinta diyaar u ah arjiga ardayda caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee leh waxqabad tacliimeed heer sare ah. Deeqda waxbarasho ayaa laga yaabaa inay qayb ahaan ama si buuxda loo maalgeliyo laakiin weli waxay kaa caawinaysaa inaad ka taageerto waxbarashadaada dhaqaale ahaan.
La aasaasay 1845 iyo himilooyin si looga faa'iideysto bulshada iyada oo loo marayo bixinta waxbarasho tayo leh iyo ka qayb qaadashada caalamiga ah ee sayniska, injineernimada iyo daawada howlgalkani ma uusan ruxin tan iyo markii la aasaasay Kulliyadda Imperial ee London taasina waxay ka dhigtay inay ka mid noqoto jaamacadaha injineernimada ugu wanaagsan. adduunka.
Ku darsigii ay adduunka ku bixisay halkaas kuma ekaan, waxay sii socotaa inay bixiso abaalmarino kala duwan oo deeqo ah iyo kaalmooyin kale oo maaliyadeed si ay uga caawiso ardayda inay maalgeliyaan waxbarashadooda ayna qayb ka noqdaan waxbarashada heer sare ah ee Imperial College. Deeqaha waxbarasho ayaa loo heli karaa shahaadada iyo boosteejo ardayda ka socota dhammaan daafaha dhulka si ay u dalbadaan.
NTU waa jaamacad cilmi-baaris deg-deg ah oo lagu aasaasay 1981, oo ku taal Singapore loona yaqaan inay tahay jaamacadda labaad ee ugu weyn Singapore. Wax ku biirinta NTU ee ku saabsan meesha injineernimada iyo bixinta waxbarasho heer sare ah waxay siisay boos ku filan oo ka mid ah darajooyinka iskuulada injineernimada ugu fiican adduunka.
Nanyang wuxuu siiyaa abaalmarin deeqsinimo deeqsi ah shahaadada (ardayda cusub & ardayda hada) iyo ardayda qalin-jabisa meel kasta oo adduunka ah oo muujiyay heer sare oo tacliimeed, si looga caawiyo ardayda inay maalgeliyaan waxbarashadooda si ay iyaguna u noqdaan injineero caan ah oo ay ugu deeqaan waxtarkooda bulshada iyo adduunka oo dhan.
Waxaa la aasaasay 1911 waxayna ku taal magaalada Beijing, Shiinaha, Tsinghua waa jaamacad cilmi baaris oo weyn tan iyo markii ay ku darsatay adduunka sayniska. Waxbarashada injineernimada halkan waa heer sare oo leh tas-hiilaad casri ah oo loogu talagalay ardayda si ay u keenaan aragtida fasalka si ay ugu tababbaraan una helaan xirfado iyo khibrad macallimiinta injineernimada caanka ah.
Jaamacadda Tsinghua waxay heshay aqoonsi caalami ah oo taxane ah sanadihii la soo dhaafay iyada oo ka dhigaysa mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican adduunka. Si loogu raaxeysto ardayda waxbarashadeeda heer sare, Tsinghua waxay bixisaa deeq waxbarasho oo dhammaystiran iyo qayb ahaan ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudahaba heer kasta oo daraasad ah.
Kani waa iskuulka ugu da'da weyn dalka Singapore, oo la aasaasay sanadkii 1905, tan iyo markaasna wuxuu soo bandhigayay heer aqooneed heer sare ah, gaar ahaan cilmiga sayniska iyo injineernimada. Hadafka ah in wax la baro, la dhiirrigeliyo oo la beddelo, NUS kama aysan leexan wax xoogaa ah u beddelidda kartida ardayda ee xirfadaha guuleysta.
Fadhiga oo ah mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican adduunka, NUS waxay dareemeysaa ardayda aan awoodin qarashka iskuulka waxayna ku jawaabtay taas iyadoo la siinayo taxane ah deeq waxbarasho oo deeqsinimo ah si ardayda looga caawiyo inay helaan tayada injineernimada tayada leh ee ay u qalmaan NUS.
The barnaamijyada tacliinta waxay ku habboon yihiin ardayda cusub iyo ardayda dhigata shahaadada koowaad ee NUS meel kasta oo adduunka ka mid ah oo leh waxqabad tacliimeed oo heer sare ah.
Caadi ahaan loo yaqaan Georgia Tech, waxaa la aasaasay sanadkii 1885 waxayna tan iyo markii ay bixineysay noocyo fara badan oo ah darajooyinka tikniyoolajiyadda taas oo gacan ka geysaneysa goobta cilmiga iyo adduunka injineernimada guud ahaan. Caalamka oo dhan ayaa loo aqoonsan yahay inuu yahay mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican adduunka, Georgia Tech waa meesha adiga lagu horumariyo kartidaada injineernimada si aad ugu qanacdo.
Daraasiin fursado waxbarasho waxaa bixiya sanad walba Georgia Tech ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha iyadoo lagu saleynayo heer sare ee tacliimeed ama baahiyo dhaqaale si qof walba uu qeyb uga noqdo waxbarashadiisa heer sare iyadoo aan laga walwalin maalgelinta.
Waxay ku taal Lausanne, Switzerland oo la aasaasay 1853, EPFL waa machad cilmi-baaris deg-deg ah ku takhasusay cilmiga dabiiciga iyo injineernimada. Ku guuleysso yoolalkaaga injineernimada sida ugu buuxda hay'addan iyada oo loo marayo heer sare oo tacliimeed iyo tabaruc weyn oo injineernimo ah ayaa ka dhigtay mid ka mid ah iskuulada injineernimada ugu fiican adduunka.
EPFL waxay bixisaa waxbarasho heer sare ah oo tayo sare leh qof walbana ma qaadi karo qarashka maaliyadeed, si loo soo bandhigo xalka arintan EPFL waxay siisaa deeqsinimo deeqda waxbarasho ardayda danaynaysa ee ka timid Switzerland iyo wixii ka dambeeya si qof walba u helo waxbarasho jaban oo haddana heer sare ah.
Tani waxay soo afjareysaa 12ka iskuulada injineernimada ugu fiican adduunka oo ay la socdaan faahfaahinta deeqaha waxbarasho. Macluumaadka waxaa lagu bixiyaa si waafaqsan, inta hartay adiga ayaa kuu taal, go'aan ka gaar dugsiga aad dooratay oo had iyo jeer xusuusnow inaad xiriir dheeraad ah la yeelatid dugsiga aad doorbideyso.
Kanada waxay leedahay iskuulo caan ah oo injineernimada aad gasacado oo bilaash ah, eeg liiska 5 iskuulada injineernimada ugu fiican Kanada oo leh deeqo waxbarasho, adiga oo kuu fududeynaya inaad waxbarto adigoon dhibeynin dhaqaalaha.
La hadalka maareeyaha gelitaanka waxay noqon doontaa tallaabada xigta ee lagu helayo xitaa macluumaad dheeri ah maadaama dhammaan faahfaahinta guud ay ku jiraan qodobkan.
Dugsiyada Farshaxanka Ugu Fiican Adduunka
Iskuulada ugu Fiican Iskuulada Injineeriyada Kombuyuutarka Adduunka
Shaqooyinka ugu Fiican ee Hooyooyinka Guriga Lajoogo oo aan lahayn Khibrad
Jaamacadaha ugu Fiican Suugaanta Ingiriisiga Iyo Qoraalka Hal-abuurka ah
Dugsiyada Injineerinka Shahaadada Sare ee ugu Fiican Adduunka
Koorsooyinka Shahaadada Sare ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Bilaashka ah ee Shahaadooyinka wata
Iskuulada ugu Fiican Injineeriyada aduunka
Waxaa cusboneysiiyay 3 bilood ka dib Adaeze Nwachukwu